Onye Ogbuaọwaraọsọ Akụgbuola Otu Nwaanyị n'Osun - Igbo News | News in Igbo Language
Otu nwaanyị nọrọ na nsonso a wee zute ọnwụ mberede ya, dịka otu onye na-anyà ụgbọala jiri ụgbọala wee kụgbuo ya ebe ọ na-agara onwe ya, ma rie mbọmbọ ọsọ.
Ihe mberede okporoụzọ a bụ nke dapụtara na mpaghara Arura dị n'Osogbo bụ isi obodo steeti Osun, ka ọ jiri nkeji iri abụọ gata elekere anọ nke uhuruchi ụbọchị Monde.
Nke a bụ nke e mere ka ụwa mara site n'ọnụ onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ụlọọrụ 'Federal Road Safety Corps (FRSC)' na steeti ahụ, bụ Agnes Ogungbemi. O kwukwara na ọ bụ ịgba oke ọsọ kpatara ihe mberede okporoụzọ ahụ.
Ọ kọwakwara na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na onye ọkwọ ụgbọala ahụ (nwéré ákàrà GNN144AH) gbahapụrụ nwaanyị ahụ ebe ahụ ọ kụgburu ya, gbahapụkwa ụgbọala Sienna ahụ o jiri kụgbu ya, wee gbaa ọsọ.
Ọ gara n'ihu kwuo na e buuru ụgbọala ahụ ga dọba n'isi ụlọọrụ ogige ndị uweojii dị na mpaghara Dugbe, ebe e jikwazịrị ụgbọala ambụlansị wee buru ozu nwaanyị ahụ ga dọnye n'ụlọ nchekwa ozu.
Ọ dụkwazịrị ndị na-anya ụgbọala ọdụ ka ha zeere ịgba oke ọsọ, n'ihi na nke ahụ so n'otu ihe kacha eweta ihe mberede okporoụzọ, ọkachasị ugbua mmiri na-ezo, maka na ụzọ na-amị amị ma mmiri zòó.